ဒီနေ့ MMရဲ့ လက်မောင်းတဖက်ပြုတ်သောနေ့. – MM Online Shopping
MM စတင်တည်ထောင်တဲ့ ကာလအတွင်း နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဒိုးတူပေါင်းဖက် ရုန်းကန်ပေးတဲ့ …. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဦး သူရဲ့ တချို့သော ကိစ္စကြောင့် MM ကနေနုတ်ထွက်သွားတဲ့နေ့လေးပါ ..
MM ဒီနေ့ ဒီအခြေအနေအထိေ၇ာက်လာတာ သူရဲ့ကြိုးစားမူကြောင့်ပါ .. သူကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် MM က ဒီလောက်ထိ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီလေး .. ဒီ၂နှစ်ကျော်အချိန်အတောအတွင်းမှာ အတူသွား ၊အတူစား .. (အတူတော့မအိပ်ခဲ့ပါဘူး စတာနော် .. ) ၀န်ထမ်းတယောက်ဆိုတာထက်စာရင် ညီအကိုပမာ ကူညီပေးခဲ့တာတွေ့ ၊အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်စွာ ကြိုးစားလုပ်ပေးတာတွေ့ customer complain တက်တိုင်း ကျွန်တော်တို့က ပြန်ဆူရင် ငြိမ်ခံနေပေးသူ ၊ တာဝန်ယူတာထက် တာဝန်သိသောသူ
ည ၁၀နာရီလောက် ပစ္စည်းလာယူတဲ့ cu ရောက်လာရင်တောင် တချက်မှာ မငြင်းပဲ ပစ္စည်းထပို့ပေးသူ
လုပ်ငန်းအပေါ်သစ္စာရှိပေးသော ညီလေး ….
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ .. ဘ၀တလျှောက်လည်း အောင်မြင်ပါစေ.. လို့MM ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် …..
မိတ်ဆွေတို့ကော အခုလို့မျိုး လက်ရုံးတဖက် ပြုတ်ထွက်ခဲ့ဖူးပါသလား…..